चिन्तित अवस्थामा आफूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने ? - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips चिन्तित अवस्थामा आफूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने ?
नेपाली समाजमा प्रचलित भनाइ छ, ” चिन्ता भनेको चिताको बाटो हो । ” जिन्दगीमा अनेक परिस्थिति आउँछन् , जहाँ हामी आफैलाई बिर्सेर चिन्तामा डुबिरहेका हुन्छौं ।
सबैभन्दा पहिले त आफू अरुका कारण दुखी भएको छु भन्ने कुरा दिमागबाट निकाल्नुहोस् । तपाईंभित्र जुन भावना र विचार आएका छन्, ती तपाईंले नै सिर्जना गर्नुभएको हो । “यी मेरा विचार र भावना हुन् । यो उनीहरुको जिन्दगी होइन, मेरो जिन्दगी हो । यो उसको या उनीहरुको बारेमा होइन, मेरो बारेमा हो ” भन्ने सम्झिनुहोस् । मेरो जिन्दगीको मालिक म आफू हूँ, त्यसैले मेरो जीवनमा आउने परिस्थितिको जिम्मेवार आफू हूँ भन्ने कुरालाई दिमागमा राख्नुहोस् ।
यसबारेमा प्रसिद्ध लेखक जोसेफ ग्रेनीले लेखेका छन् :
तपाईं अहिले चिन्तामा हुनुको कारण के हो, यो चिन्ता कहाँबाट सुरु भयो, यसको कथा के हो सबै याद गर्नुहोस्। अब त्यसलाई कथाको रुपमा डायरीमा लेख्नुहोस् । अहिले सम्मका स-साना कुरा पनि नछुटाई लेख्नुहोस्।
अब आफ्नो त्यो कथालाई पढ्नुहोस् । ध्यान दिएर पढ्नुहोस् । र, आफ्नो त्यो कथालाई एउटा शिर्षक दिनुहोस् ।
अब तपाईंले कथामा आफूलाई कस्तो अवस्थामा देख्नुहुन्छ ? आफूलाई त्यहाँ कस्तो ठाउँमा पाउनुहुन्छ ? कथालाई विश्लेषण गर्नुहोस् । के अब तपाईं आफ्नो बाँकी जीवन कथाको त्यही पिडित पात्र बनेर जिउन चाहनुहुन्छ ? के तपाईं यो कथालाई त्यही दुखद अन्त्यको रुपमा लिनुहुन्छ ? या तपाईं यो कथामा एउटा सुखद मोड आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? कथाको पात्र अथवा आफूलाई पिडित होइन, एउटा हिरो या विजेताको रुपमा उभ्याउन चाहनुहुन्छ ?
लेखक ग्रेनीले भनेजस्तै जब तपाईंले आफ्नो कथाको विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तब तपाईंले आफूलाई एउटा योद्धाको रुपमा पाउनुहुन्छ । त्यसपछि तपाईंले आफ्नो जीवनका प्राथमिकताहरु सम्झनुहोस् र डायरीमा लेख्नुहोस् । त्यसपछि ती प्राथमिकतालाई पटक पटक पढ्नुहोस् । अब आफ्ना बलियो पक्षहरु लेख्नुहोस् र ती कुरालाई पनि पटक पटक पढ्नुहोस् ।
तपाईंले गल्ती गर्नुभएको भए ती गल्तीलाई स्विकार्नुहोस् । ती गल्तीबाट सिक्नुहोस् । आफ्ना प्राथमिकताबाट विचलित भएको भए अब ‘ट्रयाक’मा आउनको लागि योजना बनाउनुहोस् । सम्झनुहोस् कि, तपाईंको जीवनको मालिक तपाईं आफू हो । तपाईंको जीवनलाई कस्तो रुप दिने त्यो तपाईंको हातमा छ ।
Previousआशीर्वाद : आकांक्षा झा
Nextरोबिन शर्माका प्रेरक भनाइहरु